Amapayipi abahlengikazi bezokwelapha anokulwa nokuvuza neminye imisebenzi; zinikezwa ngendlela oyinyumba ukuze zisetshenziswe ngesikhathi esisodwa. Umkhiqizo uzilungele izakhiwo zezokwelapha nezindawo zasekhaya zokunakekelwa kwezempilo Iphakethe labahlengikazi bezokwelapha linezici ezilandelayo: 1. Yenziwe ngendwangu engeyona enobuthi ye-polypropylene eyindwangu engalukanga; 2. I-Ethylene oxide inzalo, ihlanzekile futhi ihlanzekile. Amapayipi abahlengikazi bezokwelapha asetshenziswa kakhulu ezinhlakeni zokwelashwa nasemakhaya. Izindlela ezisemqoka zokusetshenziswa yilezi: 1. Khipha umhlengikazi wezokwelapha ...
Ukusetshenziswa kwezokwelapha okulahlwayo kunomsebenzi wokuvimbela inkwethu yothuli ukuthi ingachichimi ekhanda, ivimbele uthuli lwangaphandle lungangeni kungqimba lwezinwele, njalo njalo. Umkhiqizo ulungele ezokwelapha, inhlanzeko yokudla, i-elekthronikhi, igumbi elihlanzekile, izindwangu nezinye izimboni. Amakhemikhali ezokwelapha alahlwayo Isigqoko sezokwelapha esilahlwayo ngaphezulu Ukusetshenziswa kwesikhathi esisodwa kwamakepisi wezokwelapha amaphakheji ayi-10 Amakepisi ezokwelapha alahlwayo anezici ezilandelayo: 1. ezenziwe ngendwangu ye-polypropylene engeyona eyelukiwe nengeyona ...
Isibulala-magciwane sinomsebenzi wokubulala ama-bacterial pathogenic emathunjini kanye ne-cocci suppurative, igciwane elingasebenzi njalonjalo. Lo mkhiqizo ulungele ukubulala amagciwane entweni ejwayelekile, izingubo ezimhlophe, izindatshana ezingcoliswe yisibhedlela. 500 g 84 isibulali-magciwane ngaphambili 500 g 84 isibulali-magciwane esibuyela emuva 84 Isibulali magciwane sinezici ezilandelayo: 1. ifomula entsha ngaphandle kwe-phosphorus ukuvikelwa kwemvelo nempilo; 2.Ayikwazi ukuvala inzalo kuphela, kepha futhi ihlanzekile futhi isuse ukungcola. 84 ...
Inzalo Ukotini Swab, Alahlwayo Medical Face Imaski, Ukotini Wezokwelapha, Imaski Yama-antiviral, Imaski ephefumula, Isihlengikazi Pad,